शुक्रबार, जुन 28, 2013 आइतवार, जनवरी २,, २०१। केविन मुललेट
लिंक्डइनले हेडर बार क्षेत्र भर एक मौसम सूचनाको परीक्षण गरिरहेको देखिन्छ। हिजोदेखि, मौसम जानकारी आइकनमा होभरिंगले यो संकेत गर्दछ कि सेवा "sun365 द्वारा पावर" हो, एकका निर्माताहरू गुगल क्रोम एक्सटेन्सन र मौसम ड्यासबोर्ड वेबसाइट सूर्य 365.me। र हो, तिनीहरू भन्छन् "शक्ति," "संचालित।"
यो देखिन्छ एक अत्यन्त सीमित परीक्षण परीक्षण, वा अत्यन्त ढिलो रोलआउट, किनकि म यो सुविधा देखिरहेको एक अर्को व्यक्ति भेट्न पनि असमर्थ थिए।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, किन? मेरो अफ-द-कफ अनुमान यो हो कि तिनीहरूले विश्वास गर्नै पर्छ कि अधिक व्यक्तिहरूले लि morning्कइनको साथ बिहान शुरू गर्दछ वा यसले साइटलाई अधिक "टाँसिने" बनाउँदछ। त्यो मलाई लामो शट जस्तो देखिन्छ। तिम्रो के बिचार छ? के यो त्यस्तो सुविधा हो जुन तपाईं लिked्कइनमा गर्न चाहानुहुन्छ?
टैग: LinkedInसामाजिक बजारसामाजिक संजालपरीक्षण
जुन 29, 2013 मा 3: 59 PM
यो सबैभन्दा खराब प्रकारको फिचर क्रिम्प हो। । । नराम्रो विचार
यस पोष्टका लागि थ्याक्स, केभिन। मैले यो केही हप्ता पहिले मेरो ट्विटर पृष्ठमा पपिंग गर्दै गरेको देखें। अब आज बिहान लिंक्डइनमा। मसँग यो क्रोम एक्स्टेन्सन स्थापना गरिएको छैन। मलाई यो मनपर्‍यो कि हुँदैन भनेर निश्चित छैन, तर अहिलेसम्म यो एकदम निराश देखिन्छ।